18 waa inuu lahaadaa qalab loogu tala galay safarkaaga kaambada
Haddii aad qorsheyneyso socod dheer oo buur ah ama joogis aamusnaan oo durdur ah, kaamam waxaa laga dhigi karaa xitaa mid aad loogu raaxeysan karo iyadoo la raacayo qalabka kaamamka ku habboon. Haddii aad horay u degtay ka hor, waxaad leedahay fikrad fiican oo wanaagsan oo ah waxa aad u baahan tahay, laakiin fiiri tilmaamahan loogu talagalay m ...
Ku raaxeysiga cunnooyinka macaan inta lagu jiro kaamka
Ku raaxeysiga bannaanka weyn iyo hawo macaan ayaa runtii ka shaqeyn karta rabitaanka cuntada, laakiin "sii xumeynta" macnaheedu maahan inaadan si fiican wax u cuni karin. Kaamamku waa inuusan macnaheedu ahayn toddobaad cunno xun ah. Iyada oo qalabka saxda ah iyo xoogaa cuntada ah, aad ku raaxeysan karto naftaada iyo wax kasta oo aad cunayso. Al ...
Maxaan xerada u aadnaa?
Kaamamku waa waxqabad madadaalo oo firaaqo ah, oo ku habboon waxa Dabeecadda Hooyo ay bixiso oo kaa caawinaysa inaad dibedda ugu nasato Waqtiga lagu qaatay dibedda weyn wuxuu kicin karaa rabitaanka aqoonta meelo badan oo kaladuwan. Laga soo bilaabo cilmiga xiddigiska ilaa daawashada shimbiraha, dabeecadda waxay leedahay wax badan oo lagu baro kuwa ...
Taambuugga la buufin karo, Teendhada dusha sare ee Xtm, Teendhada Dibadda ee Joogtada ah, Bilowga Dabka Bilowga, Bilowga Dabka Magnesium, Qalabka Badbaadinta Degdegga ah,